प्रोटिन: र किन एक शरीर छ के?
केही मानिसहरू ठ्याक्कै खान र कसरी सर्वश्रेष्ठ आफ्नो आहार निर्माण गर्न के हरेक दिन लाग्छ। दुर्भाग्यवश, पोषण बारेमा अक्सर गम्भीर स्वास्थ्य समस्याहरू मात्र मान्छे लाग्छ। सबैले आहार प्रोटिन हुनुपर्छ भनेर थाह छ। यो पदार्थ के छ?
प्रोटीन (प्रोटीन) - एक विशाल macromolecules जीवन, सर्किट को एक अधिकता समावेश गर्न सक्छ। एमिनो एसिड - जो देखि सानो ब्लक यी भव्य भवनहरू निर्माण गर्न। परिणाम उद्भव को नियम अनुसार, सम्पूर्ण अणु धेरै जटिल गुणहरू, बन्न, कि एमिनो एसिड को गुण कम हुन सक्छ। कार्य मानव शरीर मा प्रोटीन द्वारा प्रदर्शन को संख्या, हुनत कार्यहरु को एक समूह अझै पनि छुट्टयाएर छ, बेहिसाब छ।
र तपाईं गल्ती बनाउन भने?
तसर्थ, प्रोटिन? के हो यो छ र एक प्रकार अन्य फरक छ कसरी? प्रोटिन र एमिनो एसिड अनुक्रम विभिन्न मात्रा। र एक सानो पारी - र प्रोटिन अणु अब आफ्नो काम गर्न सक्दैन। कहिलेकाहीं आनुवंशिक कोड त्रुटि ढोंगी र कोडिङ एमिनो एसिड को सम्पत्ति गलत प्रतिस्थापन छन् - त्यहाँ myasthenia कामला जस्तै गम्भीर रोग वा छन् Sickle सेल रक्तअल्पता। यो शरीर गरेको प्रोटिन लागि धेरै महत्त्वपूर्ण छ। यसको संरचना सम्बन्धित आनुवंशिक विकारहरु के हुन्? यो सम्पूर्ण जीव को स्तर मा अपरिहार्य र गम्भीर रोग हो।
प्रोटीन को जैविक macromolecules किनभने आफ्नो catalytic गतिविधिको मानिसहरूलाई विशेष महत्त्वपूर्ण छ। हाम्रो शरीर मा प्रक्रियाहरु को सबै भन्दा यी प्रतिक्रिया कारण ऊर्जा कारणहरूले गर्दा spontaneously सुरु गर्न असमर्थ छौं किनभने, यो गतिविधि बिना ठाउँ लिन सक्दैन। प्रोटिन किन छ? यो seboy के हो catalysis को सम्बन्ध मा छ? तपाईं थप परिचित अवधारणा, "इन्जाइम" पर्याय जस्तो लाग्न सक्छ। यो प्रतिक्रिया सुरक्षित सुरु गर्न, र त्यसपछि अनुमति दिने, प्रतिक्रिया सक्रिय अंक को घटक संग संचार सामान "गरौं जाने"। यसरी, यो प्रतिक्रिया को शुरुवात सुविधा, तर आफैले यसलाई, साथै अन्य कुनै पनि उत्प्रेरक मा खपत छैन।
को आन्दोलन को आधार
धेरै महत्त्वपूर्ण संरचनात्मक प्रकार्य। प्रोटीन मांसपेशिहरु फेला लगभग शुद्ध फारम छन्। प्रोटीन प्राप्त गर्न धेरै खान जो मासु, - जनावरहरूको मांसपेशी छ। सबै भन्दा राम्रो प्रोटीन हुनत - चोट छ (एक प्रोटीन हल्लाउने मा)। मासु पनि एकदम राम्रो अवशोषित छ। यो, सोया उत्पादन र फलियां संग बुरा अवस्था। त्यहाँ प्रोटिनको धेरै छन्, तर देखि उत्पादन शरीर लागि कठिन हुन बाहिर जान्छ यसलाई हटाउन।
को सूक्ष्म तहमा
प्रोटीन जो आकार दिन्छ को cytoskeleton भनिन्छ कक्षहरू आधार, फारम। सबैभन्दा पदार्थ को परिवहन संलग्न अर्को महत्त्वपूर्ण प्रोटिन स्वतन्त्र सेल झिल्ली मार्फत जाने गर्न सक्षम छन्। सेल को स्तर मा यो पहिले नै उल्लेख catalytic गतिविधि बाहिर छ।
जो प्रोटीन खान सर्वश्रेष्ठ हो? परंपरागत महत्त्वपूर्ण जनावर मानिन्छ, तर तिनीहरू यो बोट पूर्व-उपचार एकदम राम्रो भए राम्रो सोया संग, प्रतिस्थापित हुन सक्छ। उदाहरणका लागि, प्रोटिन पाउडर सोया बनाइएका पूर्ण प्रोटिन समावेश र पचा लिया जान्छ राम्रो मांसपेशी मासु। किन तरकारी प्रोटिन आफ्नो स्वास्थ्य को लागि राम्रो छ? यो बोसो धेरै संग सम्बन्धित र कोलेस्ट्रल उत्पादन गर्न मद्दत गर्छ छैन।
शैक्षिक प्रक्रियामा प्रशिक्षण को संगठन को वर्तमान मोडेल
को forebrain को कार्य: मनोरंजक र बुझ्ने
अन्तर्राष्ट्रिय वैज्ञानिक सम्मेलन, वैज्ञानिक सहयोग को सबै भन्दा लोकप्रिय प्रकारका रूपमा
सम्भावना सिद्धान्त को मूल अवधारणाहरु। सम्भावना सिद्धान्त को व्यवस्था
कपर सल्फेट - सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण तामा नुन
किन पृथ्वी गोलो छ? गुरुत्वकार्षण
Vudubickiy - त्यहाँ कसरी प्राप्त गर्न। निको Vydubychi विहार
रूसी संघ मा विनिमय नियन्त्रण
Aleksey Glyzin: जीवनी र काम
गिटार लागि अवस्थामा चयन
के बिरालो खुवाउन
दुनिया मा cleanest शहर: शीर्ष 5
आफ्नो हातले plasterboard एक छत कसरी बनाउने? विशेषज्ञहरु गर्दैन आवश्यक कल!
अनुमान र जीवनमा सफलता मा एक सानो: - सत्र यो भयानक छैन
करकोडर्मिस्ट विदेशी व्यवसायमा एक विशेषज्ञ हो
"Bygone साल को कथा": सिर्जना र लेखक को वर्ष
"Fitomutsil" Phytopreparation। प्रयोगको लागि निर्देशन
कला। 306 को आपराधिक कोड को: को अनुहार झूटा अभियोग?